Ukwelashwa Kwama-oxygen Hyperbaric - Ukwelashwa kwe-HBOT - Ukwelashwa Kwe-Hyperbaric
Ukwelashwa Kwama-oxygen Hyperbaric - I-HBOT Therapy- Therapy Hyperbaric
Ikhaya/Ukwelashwa Kwama-oxygen Hyperbaric - I-HBOT Therapy- Therapy Hyperbaric
Ukwelashwa Kwama-oxygen Hyperbaric - I-HBOT Therapy- Therapy Hyperbaricteknamfg2018-01-21T06:10:26+00:00
I-Hyperbaric Therapy (HBOT)
I-Science Behind Hyperbaric Medicine
I-Hyperbaric Therapy Oxygen, obeye aziwe njengo I-HBOT, iyindlela yokwelapha ehambisa 100% oksijini esimisweni se-pulmary's patient ngenkathi bengaphakathi ekamelweni elicindezelayo. Isiguli siphefumula i-oksijeni emazingeni amakhulu kakhulu kune-21% etholakala endaweni ejwayelekile yolwandle.
I-Hyperbaric Therapy isekelwe emithethweni emibili eyisisekelo ye-physics.
"UMthetho kaHenry"Kusho ukuthi inani legesi elalichithwa emanzini lilingana nokucindezela kwegesi ngaphezu kwe-liquid, uma kungenjalo isenzo samakhemikhali senzeke.
"Umthetho kaBoyle"Kusho ukuthi ekushiseni okuvamile, ivolumu kanye nokucindezela kwegesi kuyahluka.
Lokhu kusho ukuthi i-gas izocindezela ngokulingana nenani lokucindezela elifakwe kulo. Ukusebenzisa le mithetho I-Oxygen Therapy ivumela oksijeni okwedlulele ukuba ithunyelwe ezakhiweni nasezikhungweni.
Lokhu kwanda kwengcindezi encane ye-oksijeni ezingeni leselula kungasheshisa izinqubo zokuphulukisa futhi kusize ekubuyiseleni kusuka ezinkomba eziningi.
Imiphumela emibi ayilutho futhi ayidabuli isikhathi eside kakhulu. Imithi yama-hyperbaric ayilona ukwelashwa kwezinkomba eziningi kodwa ibonise ukwanda kwamakhono omzimba, ukusiza iziguli ezinenkinga ezivela ezilonda ezingapheli kuya ekukhubazekeni okunzima nokukhubazeka kwegazi.
Umlando we-Hyperbaric Therapy Therapy
Lokhu ukwelashwa okungase kulandelwe emuva kwe-1600.
Ku-1662, owokuqala I-Hyperbaric Chamber lakhiwa futhi yaqhutshwa umfundisi waseBrithani ogama lakhe linguHenshaw. Wakha isakhiwo esibizwa ngokuthi i-Domicilium, esasetshenziswa ukuphatha izimo ezihlukahlukene.
Ku-1878, uPaul Bert, isazi sezinto eziphilayo saseFrance, wathola ukuxhumana phakathi kokucindezeleka nokugula kwamatrogen emzimbeni. UBert kamuva wabona ukuthi ubuhlungu bungase buqiniswe ngokuvuselelwa.
Umqondo wokwelapha iziguli ngaphansi kwezimo ezicindezelekile waqhutshwa udokotela wezihlinza waseFrance uFuntaine, kamuva owazakhela igumbi lokusebenza elinyathelisiwe e-1879. I-Fontaine ithole ukuthi i-nitrous oxide engatholakali yayine-potency enkulu ngaphansi kwengcindezi, ngaphezu kweziguli zakhe ezine-oxygenation ezithuthukisiwe.
Ekuqaleni kuka-1900 uDkt. Orville Cunningham, uprofesa we-anesthesia, waphawula ukuthi abantu abanezifo zenhliziyo ezithile baphuthuka kangcono uma behlala eduze kwezinga elwandle kunelabo abahlala ezindaweni eziphakeme.
Waphatha umuntu osebenza naye owayenomkhuhlane futhi wayeseduze nokufa ngenxa yokuvinjelwa kwamaphaphu. Ukuphumelela kwakhe okumangalisayo kwaholela ekubeni athuthukise lokho okwakwaziwa ngokuthi "Isibhedlela se-Steel Ball" esiseduze nolwandle lwaseLake Erie. Isakhiwo sesithandathu sesakhiwo sakhiwe ku-1928 futhi sasinezinyawo ze-64 ububanzi. Isibhedlela singafinyelela ku-3 atmospheres ngokuphelele (44.1 PSI). Ngeshwa, ngenxa yesimo sezimali esicindezelekile somnotho, sakhiwe kabusha ngesikhathi ku-1942 ngezinsimbi.
I-Hyperbaric Chambers yakhiwa kamuva ngamasosha e-1940 ukuphatha abathandekayo basolwandle abahluphekile abagula ngenxa yokugula ngokweqile.
Esikhathini se-1950, odokotela baqala ukusebenzisa iMithi Ye-Hyperbaric ngesikhathi sokuhlinzwa kwenhliziyo nesiphunga, okwaholela ekusetshenzisweni kwayo kwe-carbon monoxide ubuthi ku-1960. Kusukela ngaleso sikhathi, ukuhlolwa kwe-10,000 emitholampilo nokucwaninga kwamacala sekuphelile ngezinhlelo zokusebenza eziningi ezihlobene nempilo kanye nemiphumela eminingi ebika ukuphumelela okuphumelelayo.
I-UHMS ichaza I-Hyperbaric Therapy Oxygen (I-HBOT) njengendlela yokungenelela lapho umuntu ephefumula eduze ne-100% oksijeni ngokwemvelo ngenkathi engaphakathi kwegumbi le-hyperbaric elicindezelwe kakhulu kunomshini wezinga elingaphansi kolwandle (i-1 atmosphere ngokuphelele, noma i-ATA).
Ngezinhloso zomtholampilo, ingcindezi kufanele ilingane noma idlule i-1.4 ATA ngenkathi iphefumula eduze kwe-100% oksijeni.
I-United States Pharmacopoeia (USP) neCompressed Gas Association (CGA) I-Grade A ichaza izinga lobuchwepheshe be-orogen ukuze lingabi ngaphansi kwe-99.0% ngevolumu, kanti iNational Fire Protection Association ichaza izinga lobuchwepheshe be-USP ye-oxygen.
Kwezinye izimo limelela indlela yokwelapha eyinhloko kanti kwabanye kuhambisana nokungenelela kokuhlinzwa noma kwe-pharmacologic.
Ukwelashwa kungenziwa ku-Monoplace Hyperbaric Oxygen Therapy Chamber noma Multiplace Hyperbaric Oxygen Therapy Chamber.
I-Monoplace Hyperbaric I-Oxygen Therapy Chambers uhlala nesiguli esisodwa; ikamelo lonke licindezelwa cishe ne-100% oxygen, futhi isiguli siphefumula ngokuqondile i-oxygen chamber.
Hlanganisa ama-Chambers we-Hyperbaric Orapy Therapy ubambe abantu ababili noma ngaphezulu (iziguli, izibukeli, kanye / noma abasebenzi basekela).
I-Multiplace Chambers icindezelwa umoya ocindezelekile ngenkathi iziguli ziphefumula eduze kwe-100% oksijini ngezimaski, ama-head hood, noma amashubhu okugcina.
Ngokusho kwencazelo ye-UHMS nokuzimisela kwama-Centres for Medicare kanye neMedicaid Services (CMS) kanye nezinye izithuthi zomphakathi, ukuphefumulela ebangeni lwezokwelapha 100% oksijini emkhathini we-1 wokucindezela noma ukubeka izingxenye ezizimele zomzimba ku-100% oksijeni engenzi I-hyperbaric therapy oksijini.
Isiguli se-Hyperbaric kumele sithole umoya we-oksijini ngokufaka inhalation ngaphakathi kwekamelo elicindezelweyo. Ukwaziswa kwamanje kubonisa ukuthi ukucindezela kufanele kube ku-1.4 ATA noma ngaphezulu.
Kukhona okwamanje izinkomba ezivunyelwe ze-14 e-USA.
Ukubumbana Kwemoya NamaGesi
I-Clostridial Myositis ne-Myonecrosis (i-Gas Gangrene)
Crush Injury, Compartment Syndrome kanye nezinye Ischemias Traumatic Traumatic Acute
Izifo ezithathelwanayo ze-Necrotizing Soft Tissue
Ukulimala Kwemisebe Yomlilo Okulindelekile (Amashukela Asoft neBony Necrosis)
Ama-Grafts ahlanganisiwe nama-Flaps
Ukulimala Okushisa Okushisayo Okumangalisayo
Ukuzwa kwe-Idiopathic okungahle kwenzeke ngokungahle kwenzeke